घरमा आगो लागिरहेछ, टुलु टुलु हेर्ने कि दमकल खोज्ने ?- नेता भण्डारी
दिपक अनुरागी, कपिलवस्तु पुष २६ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य चन्द्र भण्डारीले पार्टी भन्दा ठुलो राष्ट्रियता भएको बताउनुभएको छ । अहिलेको जल्दोबल्दो राजनीतिक बिषयबस्तु पाँच नम्बर प्रदेशको बारेमा बोल्दै नेता भण्डारीले घरमा आगो लागिरहेको बेला टुलु टुलु हेरेर बस्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
कपिलवस्तुको जीतपुरमा पार्टी कार्यकर्तासंग मङ्गलबार संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाले पार्टि भन्दा ठुलो देश र राष्ट्रियता भएकाले कार्यकर्तालाई प्रदेश टुक्राउने निर्णयको विरुद्धमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो ।
प्रदेश टुक्राउने निर्णय पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएकोले आफुहरु आन्दोलनमा जान नसकेको भन्दै पार्टी कार्यकर्ताले नेता भण्डारी समक्ष गुनासो गरेका थिए ।
गुनासो माथि जवाफ दिदै नेता भण्डारीले भन्नुभयो, “घरमा आगो लागिरहेको छ, दमकल लिएर निभाउन जाने कि टुलु टुलु बसेर हेर्ने ? अब यसको जवाफ दिनुहोस । ”संबिधान संशोधन विधेयक लैजानु पुर्व पार्टीमा गहन छलफल हुनुपर्ने बेला अहिले सम्म कुनै छलफल हुन नसकेको उहाले खुलासा गर्नुभयो । नेतृत्वलाई पार्टीको केन्द्रिय समितीको बैठक राख्न भने पनि बैठक बसाल्न नसकेको उहाले जनाउनुभयो । पाच नम्बर प्रदेश कुनै पनि हालतमा नटुक्रिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेस गुल्मिका सासंद समेत रहनुभएका नेता भण्डारीले पार्टिले समयमा ढङ्ग नपु¥याउने हो भने भविष्यतामा ठुलो घाटा पुग्ने ठोकुवा गर्नुभयो । एमालेले हाल राष्ट्रियताको नारा बोकेर जनताको बिचमा पुगेको प्रति इंकित गर्दै उहाले भन्नुभयो, गणतन्त्र कम्युनिष्टले ल्याए भन्छन्, धर्मनिरपेक्षता हिन्दुधर्मका बिरोधीले ल्याएको भन्छन्, संघियता मधेसी दलले ल्याएको हो भन्छन्, नेपाली कांग्रेसले ल्याएको संबिधान हो त्यहि पनि अहिलेको नेतृत्वले गर्दा गुम्ने खतरा बढ्यो ।
संबिधान जारी गर्दा जसरी देशका मुख्य राजनितिक दल मिलेका थिए संबिधान कार्यान्वयनको बेलामा पनि मिल्नुको बिकल्प नभएको नेता भण्डारीले जनाउनुभयो । भारत तर्फ लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘ जसरी संबिधान जारी गर्दा ताका भारतले रोक्ने प्रयास गरेको थियो मानेनौ, अहिले त्यहि राजनितिक बातावरणको आवश्यकता देशमा छ ।
’ तीन दल भुट्दा भारत नेपाल माथि खेल्ने वातावरण पाएको उहाँले जनाउनुभयो ।
भारत प्रति निकै आक्रमक रुपले प्रस्तुत हुनु भएका नेता भण्डारी भन्नुभयो, “संबिधान जारी गर्दा स्वागत नगर्ने भारतले अहिले संबिधान संशोधन गर्दा स्वागत गर्न खोज्नु के हो ? देशलाई तराई र पहाड मिलाउनै हुन्न भन्ने मधेसी दलको सोच अतिवादी भएको उहाले जिकीर गनुभयो ।
जनताबाट पराजित कहि मधेस केन्द्रित दलले मधेसको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने बिषयको कुनै अर्थ नभएको जिकिर थियो । देशमा लोकतन्त्र स्विकार गर्ने दलले जनमतलाई स्विाकार गर्नुपर्ने उहाको तर्क थियो ।
विवादित बिषयलाई जनमतबाट टुङ्ग्याउनुपर्नेमा नेता भण्डारीको जोड छ । कार्यक्रममा संयुक्त संर्घष समिती कपिलवस्तुका सह–संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता डोलकराम घिमिरेले जिल्लाको आन्दोलनको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
आफु चुनौतीको बिचबाट प्रदेश टुक्राउने निर्णयको विरुद्धमा लागेको बताउनुभयो । हुने जति सहयोग आफुलाई पार्टिबाट नभएको उहाले गुनासो गनुभयो । तर पनि आफु लगायतका कार्यकर्ता यसको विरुद्धमा सधै लाग्ने जनाउनुभयो ।
गृहमन्त्री निधिलाई आफ्नो काम चिन्न आग्रह
कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई आफ्नो काम चिन्न आग्रह गर्नुभयो । रेडियो बुद्धआवाज संग कुराकानीको क्रममा नेता भण्डारीले संबिधान जसरी हुन्छ पारित गरेर देखाउछौ भन्ने गृहमन्त्री निधिको बोलीको कुनै तुक नभएको उहाले जनाउनुभयो ।
“व्यवस्थापिका संसदले संबिधान शंसोधन पारित गराउने हो प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले होइन्, उहाले भन्नुभयो । ” प्रायजसो कार्यक्रममा गृहमन्त्री निधिले संबिधान जसरी हुन्छ पारित गराएर देखाउछौ भन्दै हिड्नुभएको छ ।
यस बिषयमा बोल्दै नेता भण्डारीले भन्नुभयो, गृहमन्त्री ज्यू आफ्नो पद चिन्नुन , देशलाई शान्ति सुरक्षा दिनुस्, प्रशासन चलाउनुस्, भारत नेपालमा रहेका सिमा हेर्नुस्, विग्रे भत्के पुर्ननिर्माण पनि गर्नुस् तर संबिधान संशोधन पारित गराएर छाड्दै भन्दै नहिड्नुस् ।